Nabad Sugida Jubaland oo dad u soo qabatay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. - XAL DOON
Home NEWS Nabad Sugida Jubaland oo dad u soo qabatay qarax ka dhacay magaalada...
Nabad Sugida Jubaland oo dad u soo qabatay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo.
Ciidamada Nabad Sugida maamulka Jubaland ayaa faah faahiyay howlgal balaaran oo saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo, kuwaasoo lagu baadi goobayay kooxihii ka danbeeyay qarax habeen kahor ka dhacay xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Gaashaanle Dhexe Ismaaciil Faarax Raage oo kamid ah saraakiisha NISA ee Jubaland ayaa shir jaraa’id ku qabtay xarunta Sirdoonka ee magaalada, wuxuuna ka waramay sida qaraxa uu u dhacay iyo xogaha ilaa hada ay hayaan.
Sarkaalkan ayaa tilmaamay in qaraxa oo ah Bam nooca gacanta laga tuuro lagu weeraray ,aqaaxi ku taala Aargada magaalada oo ay dhalinyaradu isaga caweeyaan, wuxuuna weerarkaasi mas’uuliyadisa dusha uga riday Kooxda Shabaab.
G/dhexe Ismaaciil Faarax ayaa carabka ku dhuftay iney ku daba jiraan soo qabashada kooxihii falkan geystay oo ay sharciga horgeyn doonaan, isagoo sababta arintaa u sahli kartana ku micneeyay raadkooda oo haatn la hayo, wuxuu kaloo sheegay in howlgaladooda dadka ay ku soo qabteen baaris iyo su’aalo weydiin ay wali ku socoto.
Si kastaba, Bamka waaa ku naf waayay hal ruux, halka ay ku dhaawacmeen 11 ruux oo kale, dadkan waxey isugu jiraan gamacsato iyo dhalinyaro iska caweyneysay, mana jirto wali koox ku faantay mas’uuliyada weerarka shacabka lagu laayay.